दुखद खबर : कोरोनाबाट ११ जनाको मृत्यु,मृतकको सख्या १४० पुग्यो ! «
दुखद खबर : कोरोनाबाट ११ जनाको मृत्यु,मृतकको सख्या १४० पुग्यो !
Published : 21 August, 2020 10:42 pm
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यससँगै कोरोराबाट मृत्यु हुनेको संख्या १४० पुगेको छ । पर्सामा २ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, दोलखा, प्युठान, धनुषा र सर्लाही र सप्तरीका एकएक जनाको मृत्यु भएको छ ।
यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा पर्साका दुई र धनुषाका एक जना समावेश गर्न बाँकी छ । त्यसैले कुल मृत्यु संख्या १३७ जना मात्र छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका-४ का ७६ वर्षका पुरुषको बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा बिहीबार साँझ मृत्यु भएको छ । ललितपुरको लुबु-१४ का ८६ वर्षका पुरुषको हृयाम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । दोलखाकी ३० वर्षीया महिलाको पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । उनी २ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।
सर्लाहीका मलंगवाका ४६ वर्षीय पुरुषको पनि पाटनमै मृत्यु भएको छ । उनको १ साउनदेखि अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । मोरङका बिराटनगर-६ सरोचियाका ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । ३ भदौमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी होम आइसोलेसनमा थिए ।
सप्तरीका ७७ वर्षीय पुरुषको बलम्बुस्थित एपीएफ अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । ३० साउनमा काठमाडौं आएका उनमा संक्रमण भएको ३२ गते पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि ग्रिनसिटीमा भर्ना भएका उनलाई बिहीबार बलम्बु लगिएको थियो । बुधबार मृत्यु भएका धनुषाको नगराइन-३ फुलगामाका ५० वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । बुधबार प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरमा भर्ना भएका उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको थियो । वीरगञ्ज-२६ सुगौलीका ५८ वर्षीय पुरुषको शुक्रबार मृत्यु भएको छ । कोरोना पुष्टि भएपछि तराई अस्पतालबाट वीरगञ्ज हेल्थकेयर कोरोना अस्पताल रिफर भएका थिए ।